Wargeyska The New York Times oo warbixin xiiso leh ka qoray loolanka Khaliijka, Qadar iyo qaraxyada Bossaso – Radio Daljir
Luulyo 23, 2019 6:45 b 0
“Bambooyinka iyo dilalka waan ognahay kuwa ka dambeeya,” ayuu ganacsade Khalifa Kayed al-Muhanadi yiri 18kii May ee sanadkan toddobaad kadib qaraxa ka dhacay Boosaaso.
“Ha ka saaraan Imaaraadiyiinta meesha, oo aysan cusbooneysiin qandaraasyada anigana waxaa keeni lahaa qandaraasyada halkan Doxa,” ayuu sii raaciyay ganacsadahan oo la hadlayay safiirka Qatar ee Soomaaliya.
“Oo ma sidaas baa weerarada in lagu eryo iyaga,” ayuu safiirka Qatar Hassan bin Hamza Hashem ugu jawaabay ganacsade al-Muhanadi.
“Saaxibadeen ayaa ka dambeeyay qaraxyadii ugu dambeeyay,” ayuu Mr. al-Muhanadi u xaqiijiyay safiirka.
Ganacsade al-Muhanadi ayaa aad ugu dhow Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, waxaana la hayaa sawiro labadooda oo isla jooga sida ay sheegtay hay’ad sirdoon ah al-Muhanadi waxa uu la safraa Amiirka.
Sida wargeyska The New York Times uu daabacay haddii ay qaraxyada Boosaaso ujeedadoodu ahayd in Imaaraadka loogaga eryo Boosaaso, waxaan shaki ku jirin in weerarkii bishii Febraayo ee lagu diley Maareeyihii Dekedda Boosaaso oo ay maamusho PO Ports/DP World ee Imaaraadka Carabta asna Bossaso ay ku dileen isla kooxaha argagixisada ee u adeega danaha Qadar.
Bishii Febraayo ee sanadkan labo nin oo hubeysan oo isu ekeysiiyay kalluumeysato ayaa toogasho ku dilay maamulihii shirkadda maamusha Dekeda Boosaaso ee laga leeyahay Imaaraadka Carabta, iyadoo ay dhaawaceen saddex qof oo kale oo shaqaale ah.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 478 Wararka 20335
UK oo Iiraan ka dalbatay si degdeg ah inay usoo dayso markabka iyo shaqaalaha